चिसो मौसम लागे सँगै बच्चा देखि बुढापाखामा देखा पर्ने टन्सिलको समस्या कसरी निर्मुल गराउने, असर लक्षण देखी सामाधान बारे जानकारी लिनुहोस - E ALL NEPAL
चिसो मौसम लागे सँगै बच्चा देखि बुढापाखामा देखा पर्ने टन्सिलको समस्या कसरी निर्मुल गराउने, असर लक्षण देखी सामाधान बारे जानकारी लिनुहोस
टन्सिल प्रायः केटा केटीहरुलाइ लाग्ने रोग हो तर जुनसुकै उमेरमा पनि लाग्न सक्छ्र । घाटी दुख्ने, थुक निल्दा वा खान खादा अफ्ठयारो हुने , ज्वरो आउने यो रोगका लक्षण हुन् । टन्सिल लिम्फाइड नामक एक विशेष प्रकारको तन्तुहरुको समूह हो । यो मुखको भित्री भाग जिब्रोको अन्तिम भागतिर नाकको बीचमा रहेको हाडमा रहेको हुन्छ । टन्सिलले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ ।
टन्सिलबाट लिम्फोसाइट र मोनोसाइट नामक दुई कोषको निर्माण हुन्छ जुन हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको महत्वपूर्ण अंश हो । यसका साथै टन्सिलले म्याक्रोकाज नामको कोष पनि निर्माण गर्दछ । यो कोषले शरीरभित्र प्रवेश गरेका जीवाणुलाई नष्ट गरेर हामीलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ। विभिन्न कारणले गर्दा यी टन्सिलमा संक्रमण भएर सुन्निनुलाई नै टन्सिलाइटिस भनिन्छ ।
जीवाणु सरेर हुन सक्छ
सामान्य ब्याक्टेरियाहरु बाट हुनसक्छ
मुख र दातको राम्रोसंग सफाई नगर्नु्
कुपोषण तथा घनावस्ती भएको ठाउमा हुनसक्छ
कान दुख्ने, टाउको दुख्ने ,सम्पूर्ण शरीर गलेको दुखेको अनुभव हुनु कब्जियत र पेट दुख्ने समस्या पनि तीव्र टन्सिलाइटिसमा देखा पर्न सक्छ । मुखभित्र हेर्दा टन्सिलहरु सुन्निएका र रातो हुन्छ । कहिलेकाहीं यी दुई टन्सिल बढेर झण्डै एक अर्कासँग जोडिन पुग्छन् ।
जीर्ण टन्सिललाइटिसमा समय समयमा घाँटी दुखिरहने घाँटीमा केही अड्केको जस्तो अनुभव भइरहने मुख मीठो नहुने सास गन्हाउने जस्ता लक्षण हुनसक्छ । यदि टन्सिलहरु अत्यन्त ठूलो भएमा यसले हाम्रो बोलीमा ,खानेकुरा निल्न, सास फेर्नमा समेत अप्ठ्यारो असजिलो अनुभव गराउन सक्छ ।
यसरी टन्सिलको संक्रमणको सही समयमा उपचार गरिएन भने विभिन्न जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ । साथै टन्सिल वरिपरी पीप जम्मा हुनु, कोन पाक्नु ,बाथ ज्वरो आउनु, मिर्गौलाको संक्रमण हुनु र मुटुमा संक्रमण भएर मुटु सुनीने पनि हुन सक्छ । जीर्ण टन्सिललाइटिसको समयमा उपचार नभए टन्सिलको वरिपरि र टन्सिलमा पीप हुनु टन्सिलमा स्रीस्ट हुनु टन्सिलमा पत्थर बन्नु जस्ता जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ ।
पिप बग्ने वा सुजन हुन्छ
लिम्फमा तन्तुहरु सुनीन्छ र कडा हुन्छन्
आराम गर्नु पर्छ
झोल कुराहरु खानु पर्छ
ज्वरो कम गर्ने र दुखाई कम गर्ने एनेल्जेसिक दिनुपर्छ
चिसो र चिल्लोबाट टाढा रहनु पर्छ ।
धुलाम्य रहने सडक कसरी एकाएक चिटिक्कै बन्दै छ राजधानी काठमाण्डौका सडक ?
टिचिङ अस्पताल भित्रै ‘चुरोट र रक्सी’ पिउनेको अखडा, पिसाब फेरेको पनि पैसा,अस्पताल प्रशासनको गैर जिम्मेवार जवाफ….(भिडियो सहित)